आज चैत १३ गते शुक्रबार तपाईंको राशि’फल यस्तो छ ! जय गणेश:: Mero Desh
आज चैत १३ गते शुक्रबार तपाईंको राशि’फल यस्तो छ ! जय गणेश
Published on: १३ चैत्र २०७७, शुक्रबार ०२:३८
मेष राशि – शत्रुपक्ष मजबुत रहनाले कार्य क्षेत्रमा बि’शेष सजग रहनु पर्ला । बिश्वासिलो ब्यक्ति हरुबाट धोका हुन सक्छ । मध्यान पश्चात मान प्र’तिष्ठामा बृद्धि हुनेयोग परेको छ मान्यजन को साथ प्राप्त हुनेछ !नयाँकार्यको थालनिका निम्ती समय उत्तम रहनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य ति’क्त ता उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
बृष राशि – नयाँ कार्यको थालनिले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । मध्यान पश्चात को ध्र को कारण मानसीक चिन्ता रहन सक्छ । दाम्पति बिच सामान्य क ल ह रहने सम्भाब ना रहन सक्छ । परीवारका सदस्यहरु बाट टाढाँ भएको महसुस रहनेछ । सामान्य आ’र्थीक अभाबको सामना हुन सक्नेछ ।
मीथुन राशिपूराना मित्रजनहरु सगँको भेटघाटले मन हर्षित रहला बिद्यार्थी वर्गका निम्ती समय त्यति उत्तम रहेको छैन । मध्यान पश्चात मेहेनत र परीश्रम को कदर हुन सक्ने योग रहेको छ चनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनेछ । मान्यज नहरुको साथ सहयोगमा आर्थीक क्षेत्र दिर्घकालिन तुल्याउ न सकिनेछ ।
कर्कट राशि गैर बिश्वस्निय ब्यत्तिहरु सगँको संगतले अपज सको सामना गर्नु पर्ला । पारीवारिक झोर सामना गर्नुपर्ने सम्भाबना रहेको छ मध्यान पश्चात भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा मन प्र’शन्न रहनेछ । सभासम्मेलन जन्यकार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त रहनेछ सवारि साधनको प्रयोगमा साबधान रहनु होला ।
सिंह राशि – ईष्ट मित्र बिच सामान्य बादबिवादको योग रहे को छ स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्नेछ ।मध्यान पश्चात मित्र तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार आउ नेछ !गरीरहेको कार्यमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । तपाई द्वारा सम्पादित कार्यको श्रेय गैर ब्यत्तिहरुले प्राप्त गर्नेछन । सामान्य यात्राकारक दिन रहनेछ ।
कन्या राशि – भोग बिलास को क्षेत्रमा समय ब्यतित हुनेछ । मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । कार्य क्षेत्रको लापरबाहिले सामान्य झन्झट आईपर्ला । मध्यान पश्चात खानपानमा बि’शेष ध्यान दिनु होला । खुट्टा तान्ने ब्यक्ति बाट बच्नु पर्ने समय छ । सामान्य अप्रिय खबरले मानसिक चिन्ता ब्यहोर्नु पर्ला ।
तुला राशि सामान्य खर्च हुने योग रहेको छ यात्रामा सा मान्य कठिनाई आईपर्न सक्छ । तपाईको कार्यको फाईदा मित्रजनले प्राप्त गर्नेछन । मध्यान प’श्चात जिवनसाथीको सहयोगद्वारा अ’प्रत्यासित लाभको अवसर मिल्नेछ नयाँ कार्यको थालनिका निम्ती समय उत्तम रहनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा भने सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
बृश्चिक राशि सामान्य चुनौति पश्चात आम्दानि उत्तम रहनेछ अरुको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्ने छ सामान्य अप्रिय खबरले मानसिक चिन्ता ब्यहोर्नु पर्ला मध्यान पश्चात जि द्दी स्वभावको कारण प्रतिश्पर्धामा परा जयको सामना गर्नुपर्नेछ । मित्रजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
धनु राशि – सामाजिक कार्यमा आफु अग्रसर रहेपनि त्यस को श्रेय भने अरु लाई मिल्नाले सामान्य खिन्नता बोध हुने छ मध्यान पश्चात बौधिक ब्यक्तिहरुका बिचमा आफु कम जोर भएको महसुस हुनेछ रचनात्मक कार्यमा समय ब्यति त रहनेछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा आर्थीक क्षेत्र दिर्घकालिन तुल्याउन सकिनेछ ।
मकर राशि मित्र जनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्ने योग रहेको छ ! साझेदारी कामको क्षेत्रबाट आम्दानि उत्तम रहनेछ । मध्यान पश्चात आम्दानिको क्षेत्र सबल रहेता पनि कार्यको क्षेत्रमा भने त्यति मन लाग्ने छैन । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ नयाँकार्यको थालनिका निम्ती समय उत्तम रहने छ ।
कुम्भ राशि – अरुको द-बाबको कारण मानसिक समस्या आई पर्ने छन् । बाणीमा मधुरता छाउनेछ । पठनपाठनमा भने समय राम्रो रहेको छ ! मध्यान पश्चात नजिकका मित्र जनहरु बिचको स म्ब न्ध टाढिन सक्ला । परीश्रमको राम्रो प्रतिफल प्राप्त होला !मिनजनहरुको साथ सहयोमा जटिल कार्यहरु सम्पादित रहनेछन ।
मिन राशि – नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशको कमि आउनेछ । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ ! मध्यान पश्चात ब्यक्तिव बिकाश मा जुट्ने समय रहेको छ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । बिश्वासिला ब्यक्तिहरु बाट धो का हुन सक्नेछ